Iziphepho ezibhubhisa kakhulu neziphepho eminyakeni yamuva | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Manje njengoba yonke indawo yasePacific isenkingeni yeziphepho neziphepho, sekuyisikhathi esihle sokubheka emuva ezigabeni ezimbi kakhulu zale micimbi yesimo sezulu esonakalisayo emlandweni wakamuva. Iziphepho zivame ukushiya ukulahleka kwezomnotho okuningi kanye nokulimala kwabantu abaningi.
Ngemuva kwalokho ngizokutshela ngalezo ziphepho Babe sematheni eminyakeni yamuva ngamandla abo aphezulu okubhubhisa.
Isiphepho uBohla sigcine ngokucekela phansi idolobha laseBangladesh kanye nempumalanga yeNdiya eminyakeni edlule. Kwenzeka ngo-1970 futhi kwabulala abantu abangaba uhhafu wesigidi. Isishingishane uNina sahlasela ingxenye enkulu yeChina ngo-10975, sashiya abantu abangaphezu kuka-200.000 beshonile, kanye nokulimala kwezinto eziningi.
Esinye sezivunguvungu zakamuva ezadala umonakalo omkhulu kwakunguMitch, ngoba ngo-1998 wayehamba kuyo yonke indawo eseCentral America, eshiya isibalo sabantu abangu-10.000 XNUMX abashonile nenani elikhulu labantu abalahlekile. Ngo-2013 iSiphepho uYolanda saba yisizinda sezindaba emhlabeni jikelele ngoba yacekela phansi ingxenye yePhilippines ishiya isibalo sokugcina sabangu-6500 XNUMX beshonile nezigidi zabantu abathintwe inani elikhulu lomonakalo wezinto ezibonakalayo.
Iziphepho ziyiziphepho ezivame ukwenzeka olwandle olunamanzi afudumele, okudala imimoya enamandla nemvula enamandla lapho kwehla umhlaba. Endaweni ye-Atlantic baziwa ngegama leziphepho ngenkathi kuyo yonke indawo yePacific baziwa njengeziphepho. Njengoba ubonile, lezi yizimo ezibhubhisa kakhulu ezibhubhisa konke okusendleleni yazo. Sethemba ukuthi esikhathini esisele sonyaka, amandla alezi zimo ngeke abangele ukulahleka kwezinto eziningi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Iziphepho ezibhubhisa kakhulu neziphepho eminyakeni yamuva